Banyere Anyị - HEBEI ANBANG ORNAMENTAL IRON CO., LTD
Onye nrụpụta ọkachamara
Hebei Anbang Ornamental Iron Co., Ltd nke dị na Shijiazhuang obodo, mpaghara Hebei, kilomita 260 site na isi obodo Beijing.
Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta igwe na -arụ ọrụ, ihe nkedo na ihe nrụpụta igwe ọ bụla.
N'ime ihe karịrị afọ 16 mmepe, anyị emebela mmekọrịta ogologo oge na ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa sitere na mba na mpaghara iri atọ. Iji mejuo chọrọ na ụkpụrụ ndị ahịa dị iche iche, anyị ga -anọgide na -esi ọnwụ na imepụta ihe ọhụrụ na ike imepụta ihe.
Ụlọ ọrụ Anbang kwekọrọ na echiche azụmaahịa "ịkwụwa aka ọtọ, na -aga n'ihu n'ihu", mepụta "ọrụ afọ ojuju", guzobe "ụdị nke ọma". Ndị ọrụ niile ga-aga n'ihu na-ewepụta echiche ọhụrụ siri ike yana ngwaahịa klaasị mbụ na ezigbo mma, ọrụ ga-eche ndị ahịa ihu.
Akara stampụ, Ihe ịchọ mma nke Iron Gates, Handrail tube, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Nkume ịchọ mma, Ogige Ogige,